MTI ရုပ်ရှင်သည် CORTEX CarryOn ကို #NABShow တွင်မိတ်ဆက်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 NAB ပြရန် » MTI ရုပ်ရှင်ပွဲတော် #NABShow မှာ Cortex CarryOn မိတ်ဆက်
MTI ရုပ်ရှင်ပွဲတော် #NABShow မှာ Cortex CarryOn မိတ်ဆက်
MTI ရုပ်ရှင်ပွဲတော် အဆိုပါ CarryOn မိတ်ဆက်, ရုပ်ရှင်ပွနျလညျထူထောငျနဲ့ post ထုတ်လုပ်မှု၏ကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ဦးစက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီး, ဒါပေမယ့်လည်း Cortex နေ့စဉ်စွမ်းအားဖြင့်တစ်ဦးချောမွေ့ပြောင်လက်ထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ဦးပံ့ပိုးပေးသူမသာပါ! ဒါဟာအရည်, ဝင်ရောက်စီးနင်း SSD ကို၏ 12TB အအေးနှင့်ကင်မရာကဒ်စာဖတ်သူကို, 4K ၏တန်ခိုးနှင့်အတူချီးမွမ်းနေသည် HD-SDI နှင့် HDMI output ကိုရှေးခယျြစရာ, 802.11ac Wi-Fi & Bluetooth ကို 4.0 EDR, GPU ကိုအရှိန်အပေါင်း 6x ကို USB 3.0, 2x Thunderbolt 2.0 နှင့် 2x HDMI ဆိပ်ကမ်းများ, အဆိုပါ transcoding စွမ်းဆောင်ရည်ကဲ့သို့သောဖိုင် Format ကို support
ARRIRAW, ProRes4444, Sony က F65 RAW, Sony က F55 RAW, အနီရောင် EPIC 5K * optional ကို Rocket-X ကိုကဒ်နှင့် ကို Canon C500 RAW ။ အဆိုပါမြန်နှုန်းအလွန်အံ့သြစေမည်! ဥပမာ: ARRIRAW @DNxHD175 74fps / ProRes 4444 @ H.264 720p 132fps ဖြစ်ပါသည် / Sony က F65 RAW @DNxHD36 44fps သည်နှင့်စာရင်းတွင်တတ်! (ပိုတွေ့မြင်: www.mtifilm.com/carryon/).
MTI ရုပ်ရှင်ပွဲတော်'' s ကို Cortex နေ့စဉ် groundbreaking စျေးကွက်ပေါ်မှာရှိသမျှအဓိကဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ကင်မရာထုတ်ကုန်ထုတ်ဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်ပေးပို့ပုံစံများများအတွက်ဦးစားပေးအယ်ဒီတာအဖွဲ့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဆို production- မှခြွင်းချက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကမ်းလှမ်း! ထိုကဲ့သို့သော AMC, CBS, ABC, TNT, FX, အ CW နှင့်အဆိုပါသိပ္ပံ Channel ကိုမှာအသင်းကဲ့သို့သောမြင့်မားသောပရိုဖိုင်းကို client များနှင့်အတူ MTI ရုပ်ရှင်ပွဲတော် တိုင်းစီမံကိန်းကိုနှင့်အတူတစ်ဦးပါရမီအတွေ့အကြုံရှိသင်္ဘောသားအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘွားတတ်၏! အဆိုပါ Cortex software ကိုအသုံးချဖို့, အစာရှောင်ခြင်းနှင့်တိကျမှန်ကန် transcoding များ၏ပို့ဆောင်မှုကြီးတွေအချိန်စတူဒီယို, ကွန်ယက်များ, သိမ်းဆည်းခြင်း, Multi-plaform ဖြန့်ဖြူးဘို့ရှိသမျှကိုဖိုင်အမျိုးအစားများကိုဖုံးလွှမ်း။ အဆိုပါ MTI ရုပ်ရှင်ပွဲတော်'' s ကိုသုတေသနအဖွဲ့က Ultra High Definition သို့မဟုတ်အပြည့်အဝ 4K မှမဆို resolution ကိုအတွက်ပြောင်းလဲရန်သာလွန် upres algorithm ကိုတီထွင်ခဲ့သည်!
ဒါမှာဖော်ရွေရှေးရှေးကနေအကြီးအသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံအတွက် NAB 15510 မှာ Booth SL2014 အားဖြင့်ရပ်တန့် MTI ရုပ်ရှင်ပွဲတော်! ဒါ့အပြင် checkout ကျေးဇူးပြုပြီး MTI ရုပ်ရှင်ပွဲတော်'' s ကိုမှာထူးခြားသော Cortex နေ့စဉ်ဆော့ဖ်ဝဲအသစ်နှင့်အဆင့်မြင့် features တွေဖုံးအုပ်ကြီးမြတ် tutorials ၏ပညာရေးဆိုင်ရာပေါ်တယ်: www.mtifilm.com/education/ ။
အဆိုပါ 2014 ပေါ်တွင်မိနစ်သတင်းအချက်အလက်ရန်သင့်ဖွင့်အားလုံးအတှကျ NAB ပြရန် သတင်း, NAB ပြရန် လွှမ်းခြုံနှင့်အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်းမဂ္ဂဇင်း Beat အသံလွှင့်အတူ "ဟုသိမှာ" နေဖို့ရန်သေချာစေပါ!
မMatthewဲသည်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ and နှင့်အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှစ်ခုလုံးတွင် ၂၅ နှစ်ကျော်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာနှင့်မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်များတွင်အထူးပြုသည်။ မMatthewဲသည်ဒစ်ဂျစ်တယ် post ထုတ်လုပ်မှု၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဌာန၏ပေါင်းစည်းခြင်းဆိုင်ရာဗဟုသုတများစွာရှိသည်။ မစ္စတာဟာချစ်သည်ဖောက်သည်များအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်ခေတ်မီဒီဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်စမတ်အသံပုံရိပ်နည်းပညာများကိုဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အနုပညာထုတ်လွှင့်ခြင်း၏အခြေအနေကိုတက်ကြွစွာသုတေသနပြုပြီးသင်၏တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုလိုအပ်ချက်များအတွက်ရရှိနိုင်သည်။
Matt Harchick အားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
2020 #NABShow: CineCentral Pavilion! - မတ်လ 9, 2020
2020 #NABShow: မင်းရဲ့ Pass ကိုရပြီလား - မတ်လ 4, 2020
2020 #NABShow: Gaffigan မှ NAB 2020 ကိုရွေးချယ်မည်။ - မတ်လ 3, 2020
2014 NAB ပြရန် Las Vegas မှ NAB ပြရန် NAB ပြရန်, Las Vegas မှာ, Pamela Kleibrink Thompson က, Pamela Kleibrink Thompson က 2014-03-31
ယခင်: Masstech PlayBox ထုတ်ကုန်နှင့်နည်းပညာကိုဆညျးပူးဖို့
နောက်တစ်ခု: DK-Technologies က NAB7မှာမိတ်ဆက် Entry Level DK T2014 အသံမီတာ